२०७८ को पुष महिना कुन राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् मासिक राशिफल, पुष महिना, पुष महिनाको राशिफल, Monthly Horoscope,मासिक राशिफल | Mero Jyotish
२०७८ को पुष महिना कुन राशिको लागि कस्तो रहला ? हेर्नुहोस् मासिक राशिफल
२०७८ पुष महिनाको मासिक राशिफल
महिनामा केही संघर्ष गर्नुपरे पनि पछिका लागि नयाँ काम सुरु गर्ने समय छ। धार्मिक र सामाजिक क्रियाकलापमा रुचि बढ्नेछ। केही थकान, आलस्य र अस्वस्थताले काममा विलम्ब भए पनि लगनशीलताले लक्ष्यमा पुर्याउनेछ। परिस्थितिको संक्रमण पार गर्दै विशेष उपलब्धि प्राप्त गर्न सफल भइनेछ। व्यावहारिक दायित्वको बन्धनले स्वतन्त्रतामा बाधा पुर्याउन सक्छ। गुरुजनसँग मतभेद देखापर्न सक्छ। तापनि अध्ययनमा प्रगति हुनेछ भने व्यवसायमा बिस्तारै फाइदा हुनेछ। अचल सम्पत्तिले उब्जाएको वादविवाद सम्झौतामा टुंगिनेछ। प्रेम र मित्रताको बन्धन कसिलो हुनेछ। महिनाको उत्तारार्धमा अलि दौडधुप गर्नुपर्ला। खर्चको मात्रा पनि बढ्न सक्छ।
प्रतिकूल परिस्थितिलाई कर्मयोगले पार लगाउन सकिनेछ। काम देखाएर फाइदा उठाउने समय छ। महिनाभरि कष्टभावमा रहने सूर्यको प्रभावले परिस्थितिजन्य समस्या भने आइरहनेछन्। प्रतिस्पर्धामा साथ दिनेहरू कम हुनेछन् भने आफ्ना कमजोरीको फाइदा उठाउनेहरू सक्रिय रहनेछन्। वैधानिक समस्याले व्यवसाय र आयमूलक काममा मन्दी आउन सक्छ। स्वास्थ्यमा कब्जियत र चोटपटकको योग देखिएकाले सजग रहनुहोला। महिनाको उत्तरार्धमा रोकिएका काम बन्ने, व्यापार बढ्ने र आर्थिक पक्ष सबल बन्ने योग छ। शुभचिन्तकहरूको साथले चुनौती पन्छाएर परिस्थिति अनुकूल बनाउन सकिनेछ। राजनीतिक, सामाजिक प्रभाव भने कमजोर रहनेछ।
सामान्य उतारचढाव देखिए पनि यो महिनामा विशेष काम शुभारम्भ हुनेछ। प्रतिस्पर्धीहरू पछि हट्नाले आस मारेको काम समेत सम्पादन हुनेछ। विभिन्न अवसर प्राप्त हुनाले जोस–जाँगर बढ्नेछ। सोखले खर्च बढाए पनि मनपर्ने भौतिक साधन, सवारी आदि जोड्ने समय छ। व्यवसायमा नयाँ कार्यको थालनी हुनेछ। मिहिनेतको परिणामले ले देश–विदेशको यात्रा गराउन सक्छ। मित्रताको बन्धन अझ प्रगाढ हुनेछ भने प्रेमसम्बन्ध वैवाहिक मार्गतर्फ अघि बढ्नेछ। प्रयत्न गर्दा टाढाको यात्रा गर्ने साइत जुर्नेछ। तर, वादविवादले यदाकदा मनमा अशान्ति र काममा प्रतिकूलता निम्त्याउन सक्छ। घरको समस्याले पनि काममा विलम्ब हुन सक्छ।
प्रतिस्पर्धाको दौडमा अग्रस्थान हासिल गर्दै विशेष उपलब्धि प्राप्त गर्न सकिनेछ। चुनौतीहरू स्वतः हट्नेछन्। आँटेका काम बन्नाले उत्साह जाग्नेछ। नयाँ उद्योग वा व्यवसाय प्रारम्भ गर्ने समय छ। आर्थिक समस्या सुल्झनुका साथै भौतिक साधनहरू जुटाउन सकिनेछ। आँट र लगनशीलताले सफलता प्राप्त हुनेछ। पहिलेका प्रतिस्पर्धीहरू समेत सहयोगी बन्नेछन्। वर्र्गीय हक–हितका लागि गरिएको प्रयत्नले दिगो फाइदा दिलाउनेछ। शत्रुबाधा, मुद्दामामिला वा कामका विविध झमेलाहरूबाट मुक्ति मिल्नेछ। मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। हडबडाउने बानीले काम र सुमधुर सम्बन्ध बिग्रन सक्छ, सावधानीपूर्वक जुट्नुहोला।
विभिन्न अवसर प्राप्त भए पनि स्वास्थ्य–समस्याले केही पछि परिएला। काममा विलम्ब भए पनि सहयोगीहरू जुट्नाले मनको डर उत्साहमा रूपान्तरित हुनेछ। गुरुजनको प्रेरणाले मन दह्रो हुनुका साथै अध्ययनमा हौसला मिल्नेछ। बौद्धिक क्षमता बढ्नुका साथै अध्ययनमा राम्रो नतिजा हासिल गर्न सकिनेछ। घरेलु काममा सन्तानको सहयोग जुट्नेछ। घरजग्गा वा पशुधनको कारोबारबाट श्रीवृद्धि हुनेछ। टाढिएका आफन्तसँग भेटघाट तथा मेलमिलाप हुने समय छ। आर्थिक स्थितिमा सुधार आउनेछ भने अड्किएका काम पनि पुनः प्रारम्भ हुनेछन्। क्षमता प्रदर्शन गरेरै स्वरोजगार बन्न सफल भइनेछ। प्रयत्न गर्दा देश–विदेशको यात्रा गर्ने अवसर प्राप्त हुनेछ।
व्यापारबाट प्रशस्त लाभ मिले पनि घर–जग्गा वा स्थायी सम्पत्तिमा केही विवाद आउन सक्छ। असंयम व्यवहारले वादविवाद निम्त्याउनेछ भने निकटजनहरूसँग बिनाकारण असमझदारी बढ्न सक्छ। महŒवाकांक्षा बढ्नाले बुद्धि–विवेकले काम लिन नसकिएला। घरेलु समस्या सुल्झाउन पनि केही समय लाग्नेछ। मेहनतले मात्र जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउन सकिनेछ। साथीभाइ र बन्धुबान्धवको सहयोगले परिस्थिति अनुकूल बन्दै जानेछ। प्रयत्न गर्दा अप्ठ्यारो ठानिएका काम पनि सम्पादन हुनेछन्। कृषि र व्यापारमा सामान्य फाइदा हुनेछ। लगनशीलताले व्यावसायिक मार्ग अवलम्बन गर्नेछ। नयाँ काम वा व्यवसाय सुरु गर्न केही समय प्रतीक्षा गर्नुपर्ला।
विभिन्न अवसर जुट्नाले यो महिना निकै लाभदायक रहनेछ। सीप र लेखनकलामा निखारता आउनेछ भने अध्ययनमा राम्रो उपलब्धि हातलागी हुनेछ। व्यापार तथा उद्योग–धन्दामा विशेष सफलता पाइनेछ। पहिलेको कामले प्रतिष्ठा दिलाउनेछ। मेहनत गर्दा जीवनशैलीमा परिवर्तन आउनेछ। लामो समयदेखि रोकिएका काम सम्पादन हुनेछन्। नोकरी तथा राजनीति गर्नेहरूलाई विशेष लाभ मिल्नेछ। उद्योग–धन्दामा पनि सफलता प्राप्त हुनेछ। शत्रु र रोगबाट छुटकारा मिल्नेछ। घरमा सुख–समृद्धि बढ्नेछ। भूमिलगायत स्थायी सम्पत्तिको विषयमा भने केही विवाद निस्कन सक्छ। दाजुभाइबीच आत्मीयता बढ्नेछ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरू सहयोगीका रूपमा देखा पर्नेछन्।
वृश्चिक तो, ना, नि, नु, ने, नो, या, यि, यु )
कामले प्रसिद्धि बढाउनेछ भने व्यवसाय र उद्योगधन्दामा राम्रो फाइदा मिल्नेछ। बौद्धिक जगतमा तपाईंको चर्चा हुनेछ। कर्मयोगले घरमा लक्ष्मी भित्र्याउन सफलता मिल्नेछ। तर छिट्टै अरूको विश्वास गर्ने बानीले समस्या निम्त्याउन सक्छ। परिस्थितिवश काममा चुनौती सामना गर्नुपर्ला। ठगीमा परिने समय रहेकाले धनमाल सुरक्षामा सजग रहनुहोला। वादविवाद र झैझगडाबाट टाढै बस्नु बुद्धिमानी हुनेछ। टाउको र आँखाको समस्याले पनि सताउन सक्छ। आफन्तसँग असमझदारी बढे पनि समस्या दर्साउँदा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। सोखले खर्च बढाए पनि विलासी वस्तुहरू जुटाउने समय छ। देश–विदेशको यात्रा गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्न सक्छ।
कामको चाप बढ्नेछ भने यो महिनामा लाभांश घट्न सक्छ। परिस्थिति संघर्षमय रहनाले चिताएको फाइदा नउठ्न सक्छ। उच्च रक्तचाप, टाउको दुखाइ वा आँखाको समस्याले पनि सताउन सक्छ। आफ्ना कमजोरीप्रति टिप्पणी वा गुनासो बढ्नेछ। आफन्तसँग असमझदारी बढ्ने सम्भावना देखिएकाले व्यवहारमा सजग रहनुहोला। समयमा समस्या दर्साउँदा शुभचिन्तकहरूले साथ दिनेछन्। बुद्धिको उपयोगले सफलताको सूत्र पत्ता लगाउन सकिनेछ। केही खर्च लागे पनि देश–विदेशको यात्रा गर्ने अवसर जुट्न सक्छ। शारीरिक थकानले सानातिना काम रोकिन सक्छन्। अर्थअभावको स्थितिबाट जोगिन आम्दानी र खर्चको सन्तुलन मिलाउने चेष्टा गर्नुहोला।
यस महिनामा आम्दानी भइरहे पनि व्यावहारिक समस्याले खर्च बढ्नेछ। ठूलो आशा देखाउनेहरूले झुक्याउन सक्छन्। सरकारी निकायबाट हुने कडिकडाउको सिकार भइनेछ। कामको चाप बढ्नेछ भने धेरै दौडधुपले स्वास्थ्य सन्तुलन बिग्रन सक्छ। पाउमा चोटपटक वा पीडाको योग देखिएकाले सावधान रहनुहोला। शुभचिन्तकहरूको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनाले चिताएको काम प्रारम्भ हुनेछ। भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। सुरुमा आँट्न नसकिएको काम १० गतेपछि सम्पादन हुनेछ। उद्योग र भूमिबाट प्रशस्त लाभ मिल्नेछ। महिनाको अन्त्यतिर व्यापार–व्यवसायमा पनि राम्रो फाइदा उठाउन सकिनेछ।
असंयम व्यवहारले यदाकदा चुनौती निम्त्याए पनि यो महिना उत्साहवर्धक रहनेछ। नोकरी, व्यापार तथा साझेदारीका काममा मनग्गे फाइदा हुनेछ। गरेका कामहरूको धेरैले प्रशंसा गर्नेछन्। अग्रजहरूको सहयोग र सद्भाव प्राप्त हुनाले महत्त्वाकांक्षी काम प्रारम्भ गर्न सकिनेछ। सुखद समाचारले उत्साह जगाउनेछ। मानसम्मान प्राप्त हुनेछ र प्रशस्तै आम्दानी बढ्नेछ। अध्ययनमा राम्रो प्रगति हुने समय छ। शत्रु परास्त हुनेछन् भने रोगबाट छुटकारा मिल्नेछ। भाग्यले असल प्रेमपात्र जुराउन सक्छ। घर–गृहस्थीमा मन रमाउनेछ। कृषि, पशुधनबाट पनि यथेष्ट लाभ हुनेछ। रोकिएका काम बन्नुका साथै दिगो काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ।
मिहिनेत र पुरुषार्थले फाइदा उठाउने समय छ। कीर्तिमानी कामको यश लिने अवसर प्राप्त हुनेछ। विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रता बढ्नेछ। लगनशीलताले सम्मानित स्थान दिलाउन सक्छ। मेहनतले जीवनशैलीमा परिवर्तन ल्याउनेछ। व्यापार तथा उद्योगतर्फ मनग्गे फाइदा हुनेछ भने काममा थप लगानी बढाउन सकिनेछ। खर्च लागे पनि भविष्यका लागि विशेष काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुनेछ। नोकरीमा प्रवेश वा पदोन्नति सम्भावना छ। आँटेका काममा सफलता मिल्नुका साथै नाम, दाम र इनाम हातपार्न सकिनेछ। स्वास्थ्यमा केही कमजोरी र चोटपटक लाग्ने योग देखिएकाले सवारी र हातहतियारको उपयोग गर्दा सावधानी अपनाउनुहोला।
विश्वघस्र पक्ष भनेको कस्तो पक्ष हो र यो पक्ष कसरी बन्छ ? जान्नुहोस्।
सपनामा के देखेमा कस्तो फल ?
कतै तपाईंले गलत दिशातिर त सिरानी लाउनुभएको छैन ?
विवाहमा गुण मिलानका आठ अङ्ग र तिनीहरुले नेतृत्व गर्ने क्षेत्र
विवाहमा गुण मिलानको महत्व
मेष लग्नमा उत्पन्न जातकको फल
मिथुन राशि भएका व्यक्तिको स्वभाव तथा अन्य शुभाशुभको विचार
राशिको स्वामी ग्रह
ज्योतिष अनुसार शेयर बजारमा सफल हुन सक्ने योगहरु
नयाँ बानेश्वर, काठमान्डौ नेपाल
Copyright © 2021 l All rights reserved to Mero Jyotish
Powered By:Triumph Media P. Ltd.